Jumma Mubarak Pic 2018 Images With New Collection - Jumma Mubarak 2018 : kukosha, maviri, zvikomborero, ः ades, uye Korani
arun Kubvumbi 19, 2018 jumma Mubarak pic No Comments
Hello nhengo dzinodiwa
Alhamduillah mumwe jummah tenzi mazuva ose yasvika again.and tine zvakare nemi pamwe jumma Mubarak pic
Dear Allah. Ndinonamata kuti aninani anoverenga this post achava kunyaradzwa kwenyu,rufaro,runyararo,rudo,uye guidance.I varege kuziva matambudziko avo,asi iwe do.please chengeta kudzivirira isu.“Ameen”.
zvimwe isu kuwana mamwe mubayiro nokuda Anonamata edu Allah wemasimba ose On ichi day.we rinokosha ndivo vateveri chitendero unorambidza mwoyo.
tiri Uma womuprofita kuti kumborasa tariro yeramangwana zvisinei mamiriro ezvinhu.
“Rasulallah S.A.W akati: “yakanakisisa wevhiki kuti zuva rinobuda pamusoro,izuva jum'ah.”
“usiku jum'ah “usiku pakati China neChishanu”Kwakaropafadzwa uye zuva jum'ah riri akaropafadzwa.
kuva muMuslim iri zvakawanda chete kuenda Masjid “Mwari”anoda kuteerera kwenyu kwete yako misangano.
Alhamdolillah nhasi jum'ah
Timwise dua nokuda Muslim Uma All
mhuri yangu yose uye shamwari
Ndinovimba uchava mukuru
Dai Allah kubvuma du'as enyu akakomborerwa zuva rino Ameen
Dear Almight! anotitungamirira yakarurama!
Ya Allah ikandimutsa
ndisati kumbobvira muka
” Havazombokundikani tariro uye kuvimba nesimba dua,
Allah achapa zvose zvaunoda chero zvakanaka iwe”
guru vhiki InshaAllah.
rinopa munhuwi rayo kunyange ruoko
Nyengetera chinhu chinoshamisa Exchange, iwe handover zvinokunetsa kuna Allah uye “Mwari” handsover makomborero ake kwamuri woramba munamato Jumma Mubarak.
Kukadzi 16, 2018 No Comments